Tor zvakare ajoina iyo Rust fever uye inotarisira kutsiva C mune ramangwana | Linux Vakapindwa muropa
Zvese zvinoratidza kuti Ngura iri kuve inodiwa mukati mehurongwa, kubvira vagadziri vazhinji vekunyorera, vangave vakazvimirira, mapoka, nharaunda kana makambani vatanga kuratidza kufarira kwavo uye kunyanya kutora matanho panyaya yekushandisa mutauro uyu mukati memapurojekiti avo.
Imwe yei mienzaniso inozivikanwa kwazvo yenguva dzino zvine chekuita neyakavhurwa sosi ndiko kuiswa kwevatyairi mu Ngura mukati meLinux Kernel kana zvakare chirongwa «Prossimo» iyo inonyanya kutarisa pakuratidzira kuyedza kufambisa yakakosha software zvivakwa mune yakachengeteka kodhi kuchengetedza Linux kernel ndangariro neRust.
Prossimo, chirongwa cheISRG chekuchengetedza Linux kernel memory neRust
Uye zvino mumwe mukuru anojoinha kune iyi fivhiri uye hapana chimwezve uye hapana chakaderera pane Tor, kubvira nguva pfupi yadarika vagadziri vayo akapa Arti chirongwa, mukati medu ratiri kushanda kugadzira kuiswa kweiyo Tor protocol mumutauro weRust.
Kusiyana neiyo C yekumisikidza, iyo yakatanga kugadzirwa seSOCKS proxy uye gare gare yakazoenderana nezvimwe zvinodiwa, Arti pakutanga inogadzirwa muchimiro cheyakaunganidzwa modular raibhurari iyo inogona kushandiswa nemaapplication akasiyana siyana. Yakave yakapihwa mari kwerinopfuura gore nemari kubva kuZcash Open Major Grants (ZOMG) chirongwa chekupa.
Tor yanhasi yakanyorwa mumutauro weC. Kunyangwe C ichiyemurika uye ichiwanika, inozivikanwa nekukanganisa mashandisiro, uye kushomeka kwayo kwepamusoro-soro kunoita kuti mabasa mazhinji epurogiramu ave akaomarara kupfuura zvaangave mune mumwe mutauro wemazuva ano .. .
Ngura inoita senzira iri pachena yekubuda mudambudziko redu. Iwo mutauro wepamusoro-soro uye zvakanyanya kuratidza kupfuura C. Zvakare, ine zvimwe zvinhu zvine hunyanzvi zvinobvumidza mutauro kuti usimbise zvimwe zvivakwa panguva yekuunganidza. Mukufungidzira kwekutanga, kana kodhi yacho ikanyorwa uye isina kunyorwa pachena kuti "haina kuchengetedzeka", ipapo zvikamu zvakakura zvezvikanganiso zvinofungidzirwa kuti hazvigoneke.
Zvikonzero zvekunyorazve Tor muNgura zvinotaurwa sechishuwo chekuwana yakakwira kodhi yekodhi chengetedzo kuburikidza nekushandisa mutauro unovimbisa rakachengeteka basa neyekuyeuka. Sekureva kwevagadziri veTor, inokwana hafu yezvose zvinokuvadzwa zvinotariswa neprojekti zvichabviswa mukutumirwa neRust, kana kodhi ikasashandisa mabhureki "asina kuchengeteka".
ngura iyo zvakare inobvumidza kuwana inokurumidza kukurumidza kusimudzira kupfuura kushandisa C, nekuda kwekuratidzira kwemutauro uye zvivimbiso zvakaomarara zvekuti hautambise nguva pakuongorora kaviri uye kunyora kodhi isingadiwe. Zvakare, kana uchigadzira purojekiti nyowani, ruzivo rwese rwapfuura neTor kuvandudza rwunotarisirwa, izvo zvinodzivirira matambudziko anozivikanwa ekuvaka, zvinoita kuti chirongwa ichi chiwedzere uye chishande.
Mune yayo zvazvino mamiriro, Arti ikozvino inogona kubatana kune Tor network, pindirana nedhairekitori maseva uye gadzira isingazivikanwe kubatana kuburikidza neTor pamwe nekupihwa kweye proxy kunoenderana neSOCKS protocol.
Kubudirira kuchiripo isina kukurudzirwa kuti ishandiswe mukugadzira masisitimu, sezvo zvisiri zvese zvehunhu zvinoitwa uye kusangana kumashure kuri padanho re API hakuvimbiswe. Yekutanga chengetedzo-inoenderana vhezheni yemutengi, inotsigira tambo yekuzviparadzanisa uye yekuchengetedza node, yakarongerwa kuburitswa muna Gumiguru.
Iyo yekutanga vhezheni beta inotarisirwa munaKurume 2022 pamwe nekuyedza kuitiswa kweakavakirwa-muraibhurari uye kuita kwekuita, apo yekutanga yakagadzikana vhezheni, ine API yakagadzikana, CLI uye fomati yekumisikidza, pamwe nekuongorora, zvakarongwa pakati paSeptember 2022.
Iyi vhezheni ichave yakakodzera kutanga kushandiswa nevazhinji vashandisi. Kwidziridzo 1.1 inotarisirwa pakupera kwaGumiguru 2022 nerutsigiro rwe plug-mune yekufambisa uye mabhiriji ekudzivirira kupunzika. Tsigiro yeanion masevhisi akarongerwa vhezheni 1.2, uye parity neC mutengi inotarisirwa mushanduro 2.0, iyo chirongwa chisati chagadziriswa.
Iyo yechipiri vhezheni yezvimedu zveRust driver driver paLinux yakatotumirwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Tor zvakare ajoina iyo Rust fever uye inotarisira kutsiva C mune ramangwana.
RUST murume wemunguva yemberi, kwete chete mutauro wakachengeteka, asi inobvumidza kushandiswa kuri nani kweanogonesa eakawanda-eprosesa processor, mukuwedzera, zvakare ine hunyanzvi hwekunyatso kurongeka zvekuti inokurumidza zvakakwana kushandiswa yekugadzirisa Kernel usinganetseke nekuita uye kwete kufa kuyedza.
Yakazara Warhammer II: Kunyarara uye Hasha Kuuya Pfupi (DLC)